३ कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट , कुन कम्पनीको कति बढ्यो ? जान्नुहोस
साताको पहिलो कारोबार दिन आइतवार २ बजे सम्म कारोबारमा आएका २२६ ओटा धितोपत्रमध्ये ३ धितोपत्रको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स , सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो। ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा १० प्रतिशत वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ६२१ दशमलव ५० पुगेको छ ।
कम्पनीको शेयरमा खरिद माग भन्दा बिक्रि माग कम भएकाले शेयरमूल्य बढेको हो । मार्केट डेप्थमा हेर्दा कम्पनीको शेयरमा ८ हजार ५ सय ९१ कित्ता शेयर खरीद माग छ भने विक्री माग २ हजार ७ सय ३६ रहेको छ ।
त्यस्तै सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलभ ९० प्रतिशत वृद्धि भएसँगै सकारात्मक सर्किट लागेको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ५ सय ६६ पुगेको छ ।
कम्पनीको शेयरमा खरिद माग भन्दा बिक्रि माग कम भएकाले शेयरमूल्य बढेको हो । मार्केट डेप्थमा हेर्दा कम्पनीको शेयरमा १२ हजार ४ सय ५० कित्ता शेयर खरीद माग छ भने विक्री माग ५ सय ३७ रहेको छ ।
त्यसैगरी, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९९ प्रतिशत वृद्धि भएर रू. ५४९ दशलमव ४० पुगेको छ । कम्पनीको शेयरमा खरिद माग भन्दा बिक्रि माग कम भएकाले शेयरमूल्य बढेको हो । मार्केट डेप्थमा हेर्दा कम्पनीको शेयरमा ६ हजार २ सय ९७ कित्ता शेयर खरीद माग छ भने विक्री माग १ सय २० रहेको छ ।